Vhura sosi mapuratifomu ekudzidzisa. Sarudzo nhatu dzekufunga | Linux Vakapindwa muropa
Vhura sosi mapuratifomu ekudzidzisa. Sarudzo nhatu dzekufunga nezvadzo
Tave tichiongorora kwenguva yakareba yemahara uye yakavhurika sosi software iyo inogona kushandiswa kudzikisira mhedzisiro yekuisa wega. Zvemaneja mamaneja hazvisi izvo. Ose ari vanyora sa lmaforamu ndiwo aive musoro wenyaya mbiri dzakapfuura mune dzino dzakateerana dzinobatsira, asi Hapana mubvunzo kuti masisitimu e manejimendi ekudzidza zvimwe anonyanya kudikanwa.
1 Vhura sosi mapuratifomu ekudzidzisa mune yekuisa wega
2 Misiyano pakati peLMS neLCMS
3 Mamwe akavhurika sosi mapuratifomu ekudzidzisa
Vhura sosi mapuratifomu ekudzidzisa mune yekuisa wega
Kana kuvharirwa kwakakanganisa chikamu chimwe, zviri pachena kuti dzidzo. Kunyangwe mapuratifomu ekudzidza ari kure ave aripo kwemakore, uye nemayunivhesiti mazhinji anoraira madhigirii akazara, kugamuchirwa kwavo kune mamwe mazinga ebazi redzidzo kuri kumucheto zvakanyanya. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuchengetedza kwemasimba evadzidzisi nezvesangano.
Panguva yechigadziro, vazhinji 'nyanzvi' vakanzwika vachitsanangura kuti mapuratifomu ekudzidzisa kure haakwanise kutsiva nzira dzechinyakare zvedzidzo. Hapana nzira yatingajoinha nhaurirano isina musoro sekunge mabhuku emapepa ari nani pane emagetsi mabhuku. Chokwadi ndechekuti izvi zvinhu zvakasiyana zvinoda maitiro akasiyana.
Mune fundo yetsika basa remudzidzi rinotariswa zvizere nevakuru. Mudzidzi anofanira kudzidza izvo zvinotaurwa kwaari, munzvimbo uye panguva yazvinotaurwa. Izvo zvirimo zvinopfuudzwa munguva chaiyo uye zvakanyanyisa fomati yemuromo inoshandiswa nerutsigiro rwemanyoro. Iko hakuna nzira dzepamutemo dzekudyidzana pakati pevadzidzi.
Dzidzo yekurebesa kuburikidza nemapuratifomu inoda kuzvipira kukuru kubva kumudzidzi. Anosarudza kuti riini uye kupi kwaanowana zvemukati uye anogona kuzviongorora kakawanda sezvaanoda. Kazhinji, izvi zvemukati zvakambogadzirwa uye akawanda mafomati anogona kushandiswa.
Mazhinji mamaneja emukati ekudzidzisa uve nezvimwe zvekushandisa pakukurukurirana pakati pevadzidzi uye mudzidzisi achishandisa tsamba dzekutumira, maforamu kana chat.
Ehe saizvozvo, rusununguko rwemudzidzi rwekuita richava shoma kana chikuva chichiitwa nesangano rekudzidzisa Iye ndiye achave uyo anosarudza marongero mune izvo zvemukati zvinowanikwa uye nguva yaanogona kuzviita saizvozvo.
Misiyano pakati peLMS neLCMS
LMS ndicho chidudziro muChirungu che kudzidza manejimendi system. Zviri acseti yemidziyo yekugadzirisa chikamu chehutongi cheyedzidzo maitiro. Ivo vanopa mukana kuzvinhu zvekudzidzisa uye vanobvumira iyo nzira yekudzidza kuti itariswe.
LCMS ndicho chidimbu che Dzidzo yemukati manejimendi system. Icho chishandiso icho Iyo inoshandiswa kugadzira izvo zvedzidzo zvemukati kuti zvigoverwa neLMS.
Muzhinji, chikuva chakakwana chedzidzo chichava mubatanidzwa wezvose zviri zviviri.
Mamwe akavhurika sosi mapuratifomu ekudzidzisa
Ndicho chinonyanya kushandiswa chikuva chidzidzoay ane zvakawanda zvinyorwa mumutauro wedu. Inogadziriswa kwazvo uye Inogona kushandiswa nekubatanidza kureba uye kumeso-kumeso kudzidza se100% kudzidza kure.
Zvekugadzira makosi, Moodle inokutendera iwe kuendesa zviri nyore akawanda-fomati zvemukati kubva kune ekunze maseva kana kugadzira mameseji uchishandisa yakavakirwa-mukati mupepeti. Izvo zvinokwanisika kuseta zvinodiwa pamakosi, mapoka eboka muzvirongwa zvakasiyana zvekudzidzisa, ipa akawanda maitiro ekuongorora, gadzirisa uye nekutaura kune basa revadzidzi uye kupa mibairo chaiyo.
Muchikamu chekutungamira, mvumo dzakasiyana dzinogona kupihwa kune varairidzi.
Kuisirwa kunoda sevha ine rutsigiro rwePHP uye Maria kana MySQL, Oracle Dhatabhesi kana Microsoft SQL dhatabhesi.
Ndicho kugadziriswa kwekushandisa kwekudzidzisa kweDrupal, a general chinangwa zvemaneja maneja zvatichataura nezvazvo mune inotevera chinyorwa. opign inotarisana nedzidzo yepamusoro uye kudzidziswa kwemakambani.
Inotendera iyo kugadzirwa kweanenge makirasi, kurongeka kweumwe neumwe kudzidzisa kweboka, kuongorora mashandiro evadzidzi, e-commerce module uye yemukati yekugadzira chishandiso.
Zvinodikanwa ivhavha ine rutsigiro rwechazvino vhezheni dzePHP uye MySQL kana Maria database injini.
OpenOLAT ndeye chinhu yechokwadi manejimendi uye manejimendi manejimendi anotarisana nekubatsira varairidzi uye vadzidzisi kumisikidza nekugadzirisa chaiwo makirasi. Zvishandiso zvakasiyana zvekubatana zvinogona kushandiswa senge maforamu, mablog, mabhodhi ezvinyorwa, nhaurirano, mapoka emapurojekiti, uye podcast.
Izvo zvinosanganisirawo kosi manejimendi uye mudzidzi kuita kwekuteedzera maficha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura sosi mapuratifomu ekudzidzisa. Sarudzo nhatu dzekufunga nezvadzo
chamilo, imwe yakanaka imwe nzira ..
Ini ndaizowedzera Ruvengo, iyo zvakare inopa foramu, zviitiko, dijitari chigadzirwa vein manejimendi, kusangana pamwe nekubhadhara uye nezvimwe zvakawanda.
Ndatenda nekuisa kwako. Cherekedza
Red Hat vs SARS-CoV-2: kununura mabhizinesi uye nharaunda
AMD Radeon Rays 4.0: izvozvi zviri pamutemo uye ichave yakavhurwa sosi